Ny saka abyssinianina, ny zava-drehetra momba ity karazana saka ity | Noti saka
Ny saka abyssinianina
El saka abyssinianina Biby be mpitia izy: milalao tokoa ary ny fomba fitondran-tenany tena kanto. Ho fanampin'izay, izy dia iray amin'ireo hazakazaka voalohany nekena, ka noho ny tsy dia be mpahalala azy, dia mbola tsy azo lazaina fa niova be izy tamin'ny fanajana ny Abyssinianina tamin'ny taonjato roa lasa izay, izay vao niresaka voalohany. biby ao amin'ny boky "Cats, the Points" izay ny mpanoratra dia Gordon Staples.
Izy io koa dia a totozy ara-tsosialy, noho izany dia mety indrindra raha mpiara-milalao kilalao ho an'ny ankizy ... fa tsy ankizy loatra 😉. Te hihaona aminy ve ianao? Andao ho any.
1 Tantaran'ny Abyssinia
2 Toetra mampiavaka ny karazany
3 Fihetsika Abyssinianina
4 Mikarakara an'io karazany io
5 Fahasalamana Abyssinia
5.1 Ohatrinona ny saka Abyssinianina?
5.2 Sarina saka abyssinianina
Ilay saka abyssinianina, na dia toa ny mifanohitra aminy aza, dia tsy avy any Abyssinia (ankehitriny dia i Etiopia), fa inoana kosa fa avy any Egypt izy io. Ny fantatra dia ny saka voalohany amin'ity karazany ity izay naseho tany Angletera dia avy any Abyssinia. Tamin'ny 1874 dia navoaka ny boky "Cats, the Points" izay noresahiko teo aloha, ary nanao famaritana voalohany ny saka antsoina hoe Zula, ilay Abyssinianina zana-kazo voalohany izay an'i Ramatoa Barrett-Lennard ary tonga tany Angletera tamin'ny 1868 niaraka tamin'ny fitsangantsanganana miaramila avy any Abyssinia. Ny vatany dia hita sy tsy nisy ratra, somary kely, nefa mahery sy hozatra.
fa misy olona tia mieritreritra fa ny karazany dia tena avy amin'ny hazo fijaliana eo anelanelan'ny volafotsy sy ny volontsôkôla miaraka amin'ny saka voakilasy teratany anglisy, ny »British Bunny».
Na ahoana na ahoana, tamin'ny faran'ny taonjato faha-XIX dia efa fantatra ny karazany, ary tamin'ny taona XX dia nanao katalaogy izy. Nanomboka niompy tamingana ny Anglisy, ary tamin'ny 1909 dia tonga tany Etazonia ny zanak'omby Abyssinia voalohany. Tamin'ny taona 1930, Abyssiniaana nohafarana avy any Angletera izay mety hahita ireo programa fitomboana ankehitriny.
Toetra mampiavaka ny karazany
Ity saka ity dia mitovy be amin'ny cougar, na dia amin'ny ambaratonga kely kokoa aza 🙂. Izy io dia manana vatana milamina sy mailaka, fijery manohina ary loha mahitsizoro tena tsara. Fa andao hojerentsika hoe inona ny fenitrao:
lohany: endrika telozoro, misy sofina boribory ary maso maitso na volamena miendrika amandy.
vatana: mahia, mahia, hozatra. Ny tongotra dia mifanaraka amin'ny ambin'ny vatana. Ny rambony dia lava sy matevina.
für: fohy ny volo, manga, volafotsy, sorrel na volondavenona.
lanja: eo anelanelan'ny 4 sy 6 kilao.
Fanantenan'ny fiainana: 13-14 taona.
Saka tena mavitrika ity, izay tia mandany ny fotoanany amin'ny fiakarana, filalaovana na fizahana. Noho io antony io, na iza na iza te hanana biby an'io karazana io ao an-trano, tsy maintsy mividy scrapers avo izay mahatratra ny valindrihana ianao ary / na manantona talantalana manodidina ny trano hahafahanao manome izay ilainao.
Izy koa dia tena marani-tsaina sy tia fiaraha-monina, mifanerasera tsara amin'ny ankizy. Ny mety ho lesoka fotsiny dia izay tsy tiany ny irery, noho izany dia tsara ny mandany fotoana betsaka araka izay azo atao miaraka aminy, ary atokana ireo minitra na ora ireo hiarahana amin'ny biby, na milalao baolina na miala sasatra.
Mikarakara an'io karazany io
Ny saka Abyssinianina, toy ny saka hafa rehetra izay lasa ampahany amin'ny fianakaviana, dia tsy maintsy mahazo fitandremana sy fiheverana izay manome antoka ny fahasambarana:
Tena tsara torohevitra omeo sakafo kalitao izy, tsy misy serealy. Ny felines dia mpihinana hena, ary tsy mila voamadinika na ny derivatives (raha ny marina, dia mety hiteraka tsy fahazakana). Safidy iray hafa ny fanomezana sakafo voajanahary azy ireo, tsy misy taolana na tsilo.
Noho ny halavan'ny volony, indray mandeha isan'andro fotsiny no tokony hokosehinao, zavatra hafa mandritra ny vanim-potoanan'ny molting. Ary koa, raha hitanao fa manana legañas izy, dia aza misalasala manala azy ireo amin'ny lamba faran'izay mangatsiaka.
Rehefa alika izy dia mananaary inona no hitondra azy amin'ny fanaovana vaksiny, ary amin'ny fandefasana azy na famonoana azy raha tsy te hanao azy io isika manomboka amin'ny 6 volana raha vavy, na 8 volana raha lahy.
Ho fanampin'izay, isaky ny mahatsiaro tsy salama ianao, dia tsara ny mandeha.
Tsy saka izay manana olana ara-pahasalamana maro, fa mety hanova fanovana hafa, toy ny hernia umbilical o tsy fahombiazan'ny renirano. Ary koa, raha hitanao fa tsy mihinan-kanina intsony izy, na kivy, na manana olana, dia tokony hoentinao any amin'ny mpitsabo biby izy hanadihady azy.
Ataovy ao an-tsaina fa raha vao natao ny diagnostika dia vao maika sitrana ianao.
Ohatrinona ny saka Abyssinianina?
Ny fikarakarana saka dia andraikitra iray izay tokony haharitra mandritra ny androm-piainan'ny biby. Raha tena vonona ny handray azy ianao, ary te hankafy ny fiarahan'ny saka abyssinianina koa ny fianakavianao dia mitadiava mpiompy matihanina. Afaka mangataka sasany izy ireo 800 euros Ho an'ny alika kely dia mety ho toa be dia be izany, saingy tsy misy zavatra tsy azo atao toa ny manome antoka fa salama ilay volom-borona vaovao izay hizaranao taona vitsivitsy amin'ny fiainanao.
Sarina saka abyssinianina
Ny saka abyssinianina dia biby kanto ary mahafatifaty miaraka amin'izay. Noho izany, hametaka sary vitsivitsy amin'ity zana-tsipika mahafinaritra ity izahay:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ny saka abyssinianina
Tsy manolo-tena hividy sy hivarotra izahay.
Manoro hevitra anao aho mba hitady mpiompy akaiky ny faritra misy anao hahita ilay saka tadiavinao.
Fanafody an-trano ho an'ny saka tsy ampy rano
Inona no dikan'ny hoe manaraka anao ny saka